Kumba Fenicha Fekitari - China Home Furniture Vagadziri, Suppliers
1. SIMBA LIFT ASSISTANCE - Power Lift Chair inosundidzira chigaro chese kumusoro kuti ibatsire mushandisi kusimuka zvisingaite pasina kuwedzera kushushikana kumusana kana mabvi, gadzirisa zvakanaka kusimudza kana kugadzika chinzvimbo chaunoda nekudzvanya mabhatani.Ose ari maviri single uye maviri mota anowanikwa.
2. VIBRATION MASSAGE & LUMBAR HEATING - Inouya 8 mapoinzi ekuzunguza akatenderedza chigaro uye 1 lumbar heat point.Ose ari maviri anogona kudzima munguva yakatarwa 10/20/30 maminetsi.Vibration massage ine 5 control modes uye 2 intensity mazinga (Kupisa basa rinoshanda nekuzunguza zvakasiyana)
Iyi Recliner sofa seti ndiyo yakanakira sofa kune chero imba yekutandarira.Inoratidzira furemu hombe ine Oversized, plussh Cushions kwese kunoonekwa neziso, iyi Recliner ndiyo embodiment yekunyaradza.
Inoratidzira inotonhorera microfiber zvinhu kune yakapfava kune yekubata chigaro, Iyi Recliner ndiyo zvese zvaungagona kuita kana kukumbira mune recliner.
Chigadzirwa saizi: 84 * 90 * 108cm (W * D * H);
Kutakura saizi: 80 * 76 * 80cm (W * D * H);
Kutakura Kukwanisa kwe:20GP:63pcs
Ichi cheya yekusimudza recliner ndiyo yekupedzisira "nyore" chigaro: Zviri nyore kutarisa, zviri nyore kushandisa uye zviri nyore kuda.Ngatitange nezvitarisiko;inochinja-chinja masitaera uye chivharo chedehwe-chitarisiko chisina kusimba muBadlands Saddle chinoita kuti ive yakakwana kune dzakasiyana siyana dzemukati.A wired remote ane mabhatani mahombe anotendera iwe kuti uise tsoka yerecliner uye kumashure uye kudzora 8 mapoinzi vibration massage inodziya basa pamwe chete, wozochengeta muhomwe yepadivi kuti isamborasika.Iyo yekusimudza ficha inokupa iwe kugadzikana uye rutsigiro kana yave nguva yekusimuka.Wedzera ane rupo padding yekunyaradza uye ega akaputirwa kudonhedza-makoiri ekutsigirwa kwakasimba: Chii chisingadi?
2.1 Kana chitarisiko chemazuva ano uye kunzwa kwekudenga kuchigara zvakanaka newe, zorora maziso ako pane ino yakatsamira simba loveseat.
2.2 Yakapfava yakapfava, iri nyore-kutarisira faux upholstery yedehwe yakakwenenzverwa nekusonanidzwa kwejumbo musiyano uye mitsara inoshamisa yekucheka-uye-kusona yefashoni-mberi mafaro.
2.3 Gray faux leather upholstery inovhara iyi sofa yemazuvano yakatsamira yechiitiko chinonakidza chakavakwa nekona-yakavharika furemu uye zvigaro zvesimbi zvakasimbiswa.Simba tambo yaisanganisira;UL Yakanyorwa
2.4Makushioni akasununguka ane bishi rekusona kumashure, piro yekumusoro ruoko inogarira uye zero-dhirowa USB plug-in inogadzirisa chiitiko chesimbe yekutandarira inokunda masofa akamira.
Nyaradzo Magetsi Lift Recliner Chair
SIMBA LIFT RECLINER: Counter-yakadzikama kusimudza meshini ine injini yakasimbiswa inosundidzira chigaro chese kumusoro kubatsira mukuru kusimuka zviri nyore pasina kuwedzera kushushikana kumusana kana mabvi, gadzirisa zvakanaka kusimudza kana kugadzika chinzvimbo chaunoda nekudzvanya mabhatani maviri.
★ Yakasimba uye ine simba kusimudza: chimiro chemazuva ano uye kushanda kwakasanganiswa nemota mbiri uye inorema-basa mashandiro, Dual Motor kudzora kumashure netsoka zvakaparadzana.Huremu hwemushandisi huremu hwemashini ndeye 300bls.Nekubata kwebhatani, simba rekusimudza rinokurerutsira kumashure kune yekupedzisira yekuridza chiitiko, kurerekera kumashure kana kusimudza uye kurerekera kuti umire, zvinyoro nyoro kune chero yakajairwa chinzvimbo.
2.1Eco-inoshamwaridzika Sofa Fenicha
2.2Iri nyore kushandisa: iyo Recliner sofa inochinjika zvakanyanya uye inopotsa yakuisa iwe padyo nenzvimbo yakachinjika.
2.3 Wakasununguka uye unakirwe iwe pachako: kuveta pasofa recliner mu "nap" Mode zvakare yakagadzikana.
Iyo ivhu huni furemu yeRecliner sofa uye yakakwira density sponge yePU Leather Sofa inokupa iwe rutsigiro rwakanyanya.
2.4 Yakasimba uye Zviri Nyore Kuchenesa: Sofa yedu yereliner yakasimudzwa nePU yakasimba, kana mvura ichiteuka pane recliner sofa, haina mvura uye yakachena.